Iskuulada Rosengård oo la dhaliilay | Somaliska
Waaxda Baaritaanka Iskuulada (Skolinspektionen) ayaa is weyn u dhaliishay tayada xanaanada iyo Iskuulada ku yaal xaafada Rosengård ee magaalada Malmö ayagoo dalbaday in si deg deg ah loo sameeyo isbedel. Skolinspektionen ayaa baaritaankeedii sanadkii 2005 ku soo bandhigtay in iskuulada ku yaal xaafada ay dhinacyo badan ku liitaan sida aqoonta ardada, amaanka iyo barida luuqada hooyo balse waxaa muuqata in arimahaas aan waxba laga qaban ilaa hada. Sadexmeelood hal meel ayaa ka baasay dugsiga hoose sanadkii la soo dhaafay taasoo ah dhibaato weyn marka loo barbar dhigo wadanka qeybihiisa kale, waa 75% arday oo u baahan in ay ku laabtaan waxbarashada - arintaan ayaa Skolinspektionen waxay u aragtaa mid aan la aqbali karin ayagoo Kamuunka Malmö ka dalbaday in 7 bilood gudahood ay ku soo gudbiyaan isbedelka ay sameeyeen. Haddii aysan isbedelin dhibaatadaan ayaa arday badan waxaa loo diidi doonaa in ay u gudbaan dugsiyada sare, ayadoo bisha August ee sanadkaan ay sii adkaan doonto shuruuda loogu gudbo dugsiyada sare. Rosengård ayaa ah xaafada Malmö ay ugu badan yihiin soo galootiga ayadoo ay Soomaalidu aad ugu badanyihiin, ma ahan markii ugu horeysay ee la dhaliilo dugsiyada ku yaal xaafadaha soo galootiga oo lagu yaqaan tayo xuma.
Iskuulada Rosengård oo la dhaliilay
Waaxda Baaritaanka Iskuulada (Skolinspektionen) ayaa is weyn u dhaliishay tayada xanaanada iyo Iskuulada ku yaal xaafada Rosengård ee magaalada Malmö ayagoo dalbaday in si deg deg ah loo sameeyo isbedel.
Skolinspektionen ayaa baaritaankeedii sanadkii 2005 ku soo bandhigtay in iskuulada ku yaal xaafada ay dhinacyo badan ku liitaan sida aqoonta ardada, amaanka iyo barida luuqada hooyo balse waxaa muuqata in arimahaas aan waxba laga qaban ilaa hada.
Sadexmeelood hal meel ayaa ka baasay dugsiga hoose sanadkii la soo dhaafay taasoo ah dhibaato weyn marka loo barbar dhigo wadanka qeybihiisa kale, waa 75% arday oo u baahan in ay ku laabtaan waxbarashada – arintaan ayaa Skolinspektionen waxay u aragtaa mid aan la aqbali karin ayagoo Kamuunka Malmö ka dalbaday in 7 bilood gudahood ay ku soo gudbiyaan isbedelka ay sameeyeen.
Haddii aysan isbedelin dhibaatadaan ayaa arday badan waxaa loo diidi doonaa in ay u gudbaan dugsiyada sare, ayadoo bisha August ee sanadkaan ay sii adkaan doonto shuruuda loogu gudbo dugsiyada sare.
Rosengård ayaa ah xaafada Malmö ay ugu badan yihiin soo galootiga ayadoo ay Soomaalidu aad ugu badanyihiin, ma ahan markii ugu horeysay ee la dhaliilo dugsiyada ku yaal xaafadaha soo galootiga oo lagu yaqaan tayo xuma.
Wadamada ugu farxada iyo murugada badan aduunka oo la soo bandhigay, kaalintee galeen Sweden iyo Somalia?
Dooda Axada: Dabaal degga Juulka ama Kirismaska
Bashiir Cali ( Abuxudayfah ) says:
March 8, 2011 at 10:02
Ilmaha inta badan guryaha ayay ka dhibanyihiin , siiba kuweena Soomaaliyeed, waalidka ma caawiyo maxaa yeelay intooda badan aqoonta luuqada ayaa ku yar , ilmihiina kuma adkeeyaan aqriska casharada !
Arinta muhiimadeeda leh ayaa ah ugu yaraan in ay ilmuhu helaan qol u gaara waxbrashada . Oo ka degan guriga intiisa kale.
Waxaad arkee mararka qaar ilmo Qolka fadhiga wax ku dhex aqrisanaa , isla markaana Tiifii (TV) ka daaranya , Kombuuterka ka shidanya laguna sheekeeysanaa !!
Marka sidee ilmuhu wax ugu bartaan qol sidaa ah ?
Jawaab ayaan idinka doonaa dadwaynooooooow??